Fanatitra - Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
Ny hevi-dehibe ny bokin’ny Levitikosy dia ny mampianatra ny firenen’ Isiraely ny fomba tsy maintsy hiainany sy ny hanompoany amin’ny maha olom-boafidin’Andriamanitra azy nohon’ny fahamasinany, mba afahan’Andriamanitra mitoetra eo amin’izy ireo
ary koa mba hahasarika an’izao tontolo izao any Aminy.
Ny toko 5 voalohany dia mitanisa fanatitra 5 karazana: fanatitra odorana (1), fanatitra hohanina (2), fanati-pihavanana (3), fanatitra nohon’ny ota tsy nahy (4), ary fanatitra nohon’ny fahameloana (5).
Tsy tokony ho dinganina ireo toko ireo fa misy lesona betsaka afaka ho raisintsika ao. Mety misy amintsika nieritreritra fa fanatitra nohon’ny ota avokoa ireo 5 ireo, kanefa raha jerena akaiky, 2 ihany no fanatitra nohon’ny ota, fa 3 dia fanati-piderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra :
Ny fanatitra odorana dia manambara ny fanoloran-tena tanteraka ho an’Andriamanitra.
Ny fanatitra hohanina dia fomba hanehoana fisaorana an’Andriamanitra nohon’ny fitantanany (provision).
Ny fanati-pihavanana dia maneho ny finiavana hanolotra ny tsara indrindra ho an’Andriamanitra, ary koa ny fanolorana atao ho an’ny mpisorona sy
ho an’ny mpanompo hafa koa.
Ny fiainan’ny olom-boavonjy dia fiainam-pibebahana sy fiderana an’Andriamanitra. Ny fibebahana dia mitarika anao amin’ny fitombonao amin’ny fahamasinana. Ny famonjena dia tsy maintsy arahina fahamasinana (Efesiana 1:4).
Ny fiainan’olona masina dia voafaritra ho fiainam-panolorantena tanteraka ho an’Andriamanitra, fiainam-bavaka fisaorana an’Andriamanitra noho ny fitantany, ary fieritreretana ny mpiara-miombona ao amin’ny Tompo.
Andriamanitra fa tsy isika akory no mamaritra ny fomba tokony hanompona azy? Hita taratra eo amin’ny fiainanao ve ireo marika fiainam-piderana ireo?